Ny Tantaran’i Raiza Ruiz, Nolazaina Fa Maty Nefa Velona Mirijarija Be · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2015 2:26 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, বাংলা, Español
Raiza Ruiz. Sary tao amin'ny Radio Ambulante.
Niainan'i Raiza Ruiz ny sedra hafahafa nanambaràna ny fahafatesany araka ny lalàna nefa dia olona mbola miaina izao.
Tsy maintsy namerina namaky ny andàlana farany indray ve? Tsy ianao irery akory. Kanefa, izany no zava-misy hafahaha niainan'i Raiza Ruiz, ilay hany sisa velona tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina iray teny an-dàlany namakivavaky ny Amazonia Venezoeliana. Namakivaky an'i Puerto Ayacucho renivohitry ny firenena i Ruiz mba haka ny karamany. Tamin'izany fotoana izany, Septambra 1981, 26 taona i Raiza ary niasa toy ny mpitsabo mpiana-draharaha teny anivon'ireo vondrom-piarahamonina indizena tao amin'ilay faritra:
Hoy aho tamin'ny tenako fony tao anaty ala matevina tao hoe : “tsy ho faty eto kosa aho, tsy ho faty eto kosa aho. Ho hitan-dry zareo aho. Any Caracas aho no ho faty, na rahoviana na rahoviana araka ny tiako.’ Alaivo sary an-tsaina ny fahasahiana amin'izany, ny hadalàna, ary ny horohoro…
Nanamarika ny fiainany manontolo ilay loza mahatsiravina. Niatrika zavatra maro tsy mahazatra azy i Ruiz hatramin'ny fotoana nitrangan'ilay loza, isan'izany ny fandàvan'ny polisy ny fanambaràny ho tsy mitombina satria olona efa voalaza eo anatrehan'ny lalàna fa efa maty no nanolotra izany ho azy ireo.
Eto ambany dia azonao renesina manontolo ny tafatafa amin'ny teny Espaniola, nomena lohateny hoe Tatitra Diso Momba Ny Fanambaràna Mialoha Ny Fahafatesana, novokarin'i Rafael David Sulbarán, mpanao gazety ary talen'ny plumavolatil.com, miaraka amin'ny namantsika akaiky Silvia Viñas, tonian-dahatsoratry ny Global Voices, faritra Amerika Latina. Ny dika amin'ny teny Anglisy tamin'ilay tafatafa kosa dia azo raisina eto.